Burkina Faso, osisi na amaghi nke Africa | Akụkọ Njem
O doro anya na mpaghara ojii bụ ebe akụkọ na akụkọ ifo dị ukwuu. Ebe ị ga-ahụ Burkina Faso, otu n’ime obodo ndị kacha umeala n’obi n’Africa mana ọ bụkwa otu n’ime obodo kacha anabata ọbịa ma na-atọ ndị mmadụ ụtọ. Oké ọhịa ahịhịa ahịhịa na mpaghara ọzara na ebe dị nsọ na mba a nke agbụrụ iri isii na asaa bi. Nke a bụ ihe kpatara Burkina Faso ji bụrụ njem gị ọzọ.
Travelga Burkina Faso bụ ime ya n'etiti Africa. Ogologo oge a, obodo a ebiela na azụ ya na njem nlegharị anya na obere nke nta ọ na-amalite inweta aha dị ka ebe njem na njem.
1 Kedu ka Burkina Faso dị?
2 Ouagadougou, isi obodo
3 Ebe ndị ọzọ nke mmasị na Burkina Faso
3.1 Ogige Ntụrụndụ Kaboré Tambi
3.5 Mkpọmkpọ ebe nke Loropéni
4 Otu esi enweta Burkina Faso?
Kedu ka Burkina Faso dị?
Ọ bụ mpaghara oge ochie ebe ndị bi na ya si bido ịchụ nta na nchịkọta. Na narị afọ nke XNUMX, ọ rụrụ ọrụ azụmahịa pụtara ìhè na alaeze Songal, alaeze nke dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ Africa. Ọtụtụ afọ ka nke ahụ gasịrị, ike ọchịchị abụọ dị na Europe dị ka Great Britain na France rụrụ ụka maka iweghara mba ahụ, na France weghaara ya ruo etiti narị afọ nke XNUMX. N’ụzọ dị otu a, French bụ asụsụ gọọmentị nke mba kewara na mpaghara iri na atọ nke agbụrụ dị iche iche iri isii na asaa bi.
Otu ọ bụla dị iche iche nwere ọdịiche dị iche na ha dị iche na ibe ha ọkachasị n'ihi omenala na ọdịbendị ha. Dịka ọmụmaatụ, ndị Mossi (agbụrụ ndị nwere agbụrụ) nwere ọdịnala dị ogologo, ebe Guruntsi bụ ndị ama ama site na ụlọ mara mma mara mma nke adobe ejiri atụmatụ geometric chọọ na ihe enyemaka okpukpe.
Yabụ, Burkina Faso kewara ókèala ya n'etiti agbụrụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ileta nkuku niile iji mara ụzọ ndụ dị iche iche nke ndị ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na agbụrụ ndị a niile nwekọrọ ọnụ, ọ bụ ile ọbịa, ihe na-emetụtakarị mgbe ị bịarutere obodo ọ bụla.
Ouagadougou, isi obodo
E hiwere ya na narị afọ nke 1400 ma nweta ihe dị mkpa site na afọ XNUMX. O nwere ike ịbụ otu n’ime amaala amaala amaala amaala na mba Afrịka, mana ọ nwere ihe ncheta ya na ebe ndị njem na-amasị ndị njem.
Ozugbo ebe a, ọ bara uru ileta Katidral nke Immaculate Design (otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke ụkpụrụ ụlọ na mba ahụ nke ewuru gburugburu 1930 n'oge ọrụ French), Manega Museum (nke onye edemede bụ Fréderic Pacéré Titinga kere iji chekwaa na kesaa ọdịbendị Burkinabe), Naba Koom Square, nolọ Ọrụ Etnographic, Ogige Ouaga-Loudun, Ogige Bang-Wéoogo Urban, National Music Museum na Great Central Market (ebe nzukọ maka ndị ahịa na ndị ahịa iji mepụta azụmahịa, nke a na-eme kemgbe ọtụtụ narị afọ.)
Ebe ndị ọzọ nke mmasị na Burkina Faso
Ogige Ntụrụndụ Kaboré Tambi
Ogige Ntụrụndụ Kaboré Tambi, nke dị na mpaghara Ghana, nwere ọtụtụ ahịhịa, nwere ihe karịrị ụdị ahịhịa 200, yana anụmanụ dị mkpa, nwee ike ịchọta enyí, antelopes, jackals, hyenas, boars ọhịa na agụ iyi.
Bobo-Dioulasso bụ obodo nke abụọ kachasị ukwuu na Burkina Faso ma a na-ahụta ya isi obodo akụ na ụba. Ọ bụkwa ebe mara mma maka ndị njem n'ihi ụlọ ochie ochie nke Sudan nke e wuru na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, agbata ochie ya, ebe ngosi ihe mgbe ochie, zoo, ahịa seramiiki, ọdọ mmiri azụ dị nsọ na ụlọ eze Konsa. .
Ọ bụ obodo atọ kachasị ukwuu na Burkina Faso na obodo ugwu nke na-arụ ọrụ dị ka isi obodo Northern Region. Isi ebe nlegharị anya ya bụ ọdọ mmiri ya, ụlọ Yanea Naba na ili nke Kaba Kango.
Na nso Banfora bụ Karfiguela Waterfalls. Ebe kachasị mma iji nweta ihe okike na ọbụna mikpuo n'ime ọdọ mmiri ya, nsụda mmiri na ụgbọ mmiri ọhụrụ. Dị ka ịmata ihe, n’oge udu mmiri n’Africa, nsụda mmiri ahụ dị egwu.
Mkpọmkpọ ebe nke Loropéni
Loropéni bụ obodo dị na ndịda nke Burkina Faso, ebe a hụrụ mkpọmkpọ ebe nke Loropéni, nke a na-ahụta dị ka Ihe Nketa Worldwa. Ebe a na-amụ ihe mgbe ochie bi na mpaghara square mita 11.130 ma nwee ebe nchekwa kachasị mma nke otu iri nke ewuru karịa 1.000 afọ gara aga. Ihe mejupụtara mkpọmkpọ ebe Loropéni bụ mgbidi okwute na-acha uhie uhie nwere ike ịgafe mita isii.
Otu esi enweta Burkina Faso?
Air France na-ejikọ Paris na Ouagadougou kwa ụbọchị maka ihe dị ka € 700 gburugburu. Ozugbo ị ruru ebe ahụ, nhọrọ kachasị mma bụ ịkpọzite ụlọ ọrụ pụrụ iche nke na-ahazi njem nke onwe gị gburugburu Burkina Faso na mba ndị gbara ya gburugburu.
Ma ọ bụ kọntaktị onye njem ahụ na nke kachasị dịpụrụ adịpụ na nke a na-amaghị ama ma ọ bụ na ọ dị mkpa ibi ezigbo njem, Burkina Faso bụ mba zuru oke. Ọ ga-abụrịrị na ahụmahụ ahụ n’ókèala a enyi na enyi ga-eju gị anya ma mesịa mee gị obi ụtọ. Ebumnuche nke na-akọwa na mgbe njem ahụ na-abịa ná njedebe, ọchịchọ ịlaghachi ma ọ bụ ịmara otu n'ime mba ndị ọzọ gbara ya gburugburu agaghị abụ nke a na-apụghị ịpụ apụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Burkina Faso, osisi na amaghi nke Africa
Njem njem anọ gafere oke ọhịa Spain maka ọdịda a